Tadiom-pitiavana | 8
- "Tsy maintsy mitady olon-kafa hisari-zoro amin’ity Hery ity aho fa fantatro tsara ny toetrany, ... Iza re? Sa i … ! Marina tokoa, ny zanak’i Flô, mety mitovitovy taona amin’i Hery iny, sady nianatra tany an-dafy. I Flô koa moa nimenomenona taminay foana hoe mba hitadiavo namana any hono ny zanany fa sao dia hanao tokan-tena eny koa !! Be loatra marina tokoa ny tokan-tena amin’ny fianakavianay an! Koa maninona moa !Tsy fantatra marina anie izay anjara !
Ssshhh ! ny hafa indray moa ity no andaniako rondoha, nefa ity izaho aza mba mitady nefa tsy mahita !" hoy i Tahiana toa miady saina irery na dia teo akaikiny teo aza i Hery.
- "Hery an ! hitako tokoa fa tena faly ianao izao fa na izany aza mba misy zavatra mampiahiahy ahy ihany!"
- "Inona aloha no tianao hambara amin’izany e?"
- "Efa azonao moa iny ny pasipaoronao, dia haka visa an’ny amin’ny masohivoho frantsay amin’izay izao ianao! Sao dia tokony hiandry aty ihany ianao fa tsy mandeha mankany, ho fandaniana mihoam-pampana anie no hataonao izao e! Moa tsy fantatrao akory izay mety hitranga any!"
- "Andray ry Tahiana ! efa tongotra mby an-dakana ny ahy ka tsy hiverenako intsony. Fa eritrereto fa mailaka vao omaly anie no nalefan’i Alexia tamiko e! Ary nanafatra izy fa hijanona any hamita fianarana. Dia efa mivonona ny hahita azy ny saiko na inona na inona fitrangany. Fa maninona aloha ianao no lasa manohitra ahy indray amin’ny handehanako e!"
- "Tsy hoe manohitra na manakana anao akory aho ny handeha ho any, fa ny tranga reko tamin’i Malala dia tsy mifanaraka akory amin’izany voalazanao izany aza!"
- "Fa inona marina anefa ny zavatra nolazain’i Malala anao e?"
- "Misy ifandraisany aminao hono ny antony nahatonga an-i Alexia tsy hiverina aty! Nolazainy fa tsy mba niresaka momba anao mihitsy izy fa te-hanadino anao tanteraka!"
- "Izao ry Tahiana an! ny fihevitrao, na ny fihevitry Malala dia tsy mitovy amin’i Alexia. Vao afaka namaly ny antsoko fotsiny izy dia faly aho, rehefa azoko toky fa salama tsara izy dia misaotra an’Andriamanitra aho fa mbola avotra soa aman-tsara ilay tiako. Ka tsy ahoanao izay hataoko, ny hevitro efa tapaka, handeha aho, dia izay. Vao mahazo fialan-tsasatra fotsiny aho dia lasa!"
Tsy niteny intsony i Tahiana, ny tranony rahateo koa moa efa akaiky, nampandroso an’i Hery izy dia navelany hipetraka teo ambony seza teo ny tovolahy, izy kosa lasa naka ranom-boankazo tany an-dakozia hosotroina.
- "Tsy haiko", hoy i tahiana tany an’eritreriny, "fa maninona marina ary aho!
Tena fantatro! fahasarotam-piaro no mahazo ahy, fa maninona, tena tia an’i Hery aho, dia tsapako fa mitady handao ahy izy dia lasa saro-piaro tampoka teo aho. Dia sahiko ve ny hanimba ny saiko amin’i Hery nefa izy aza efa mivaky fa tsy mihevitra izay momba ahy akory. Inona re no ataoko?"
Iny izy nitondra vera roa dia niara-nipetraka teo ambonin’ilay seza lava ary samy nisotro ranom-boankazo mangatsiatsiaka tsara. Lany iny dia hoy i Hery :
- "Misaotra betsaka Tahiana an !, tsy hadinoiko mihitsy ny zavatra nataonao hatramin’izay."
Nitsiky fotsiny i Tahiana ! Tsy nahateny fa ny mason’i Hery no nobanjininy tsara sady niorirana nanatrika ity tovolahy no nanatona moramora ny molony hifanoroka.
Efa nifanakaiky tokoa ny molotr’izy ireo, fa dia nosakanan’i Hery tamin’ny fanondrony ny molotr’i Tahiana. Dia natosiny hihataka taminy moramora.
- "Hery an ! aza manao ahy izao ianao an! Fantatrao tsara ny any am-poko. Hery an ! Izaho ange tena tia anao e! Raha mba tsapanao mantsy ny halalin’ny fitiavako anao!"
- "Tahiana an ! efa nifampiresaka tsara ny momba izay isika sy ianao ! Ataoko fa fantatrao tsara ny hamafin’ny fitiavako an’i Alexia. Ary efa nampanantena olona iray aho fa ho hendry tsy hanao hadalana intsony fa hijanona amin’i Alexia irery ihany."
- "Hery an ! noho ny fitiavako anao anie no mahatonga ahy hiteny hoe mijanona aty, aza mankany fa hanimba ny fonao any ianao. Tsy fantatrao marina izay mitranga ka halahelo mafy aho raha vaky ny fonao miverina avy any"
- "Tsia dia tsia kosa e!" hoy i Hery nitsangana, "fantatro ny ataoko, fantatro tsara ny fitiavako an’i Alexia, ary fatatro tsara koa ny fitiavany ahy ; faniriany ny hijanona hianatra any an-dafy dia mandefitra aho noho izay fitiavako izay, izaho no hankany aminy, tsy andriko intsony ny hifankahita aminy."
- "Hery an ! irery ange aho tsy eo intsony ianao e!"
- "Tsy te-handratra ny fonao aho ry Tahiana fa ianao angamba efa manatona anao ny anjaranao, nefa toa ny ravaka manendrika ny hafa no tianao hofihizina ho anao irery. Efa nanome toky olona iray aho fa tsy hanao hadalàna intsony, ka tsy ianao no handravako izay toky nataoko izay. Efa niova aho fa tsy toy ny taloha intsony."
- "Dia hadinonanao avokoa ve ny nataontsika hatramin’izay?"
- "Miala tsiny aminao aho fa mafy ny teniko, nefa tsy maintsy mijoro am-pahamendrehana amin’izay aho fa lehilahy ; tsy maintsy mandeha aho veloma ianao Tahiana an!"
Lasa i Hery. Efa fantany fa mety hihafara amin’izay indray ny zavatra hitranga fa naleony nandà avy hatrany mba tsy hisian’ny fanenenana rehefa avy eo.
Toa tsy nahahetsika teo i Tahiana. Ny varavarana nivoahan'i Hery no nobanjininy mafy. Nalahelo mafy tamin’izay nanjo azy izy. Very ny heviny amin’ity fahasarotam-piarony. Te-hitroatra anefa tsy afaka. Malahelo fa toa handamoka am-boalohany ilay valifaty tiany hatao amin’i Malala. Izy anefa mihevitra fa ho nenina tsy misy fiafarany no hahazo an’i Hery raha mbola midikiditra amin’ny fianakavian-dRatrema ihany izy.
Niverina tao antsainy indray ilay eritreriny teo aloha nony afaka kelikely.
- "Tsy maintsy ampifanatoniko amin’ny zanak’i Flô aloha i Hery mandra-pandehany fa sao dia afaka ny hanova hevitra azy ihany ikalakely iny." Hoy izy anankapo. Noraisiny ny findainy dia niantso an’i Flô izy.
- "Allo Flô!"
- "I Tahiana marina, ahoana akia ! inona ny vaovao?"
- "Tsy dia misy akia an ! Fa te-hanontany aho hoe aiza moa no ahitako ny zanak’indry fa mba te-hiresaka aminy aho."
- "Fa ahoana akia! angaha misy tsy metimety, i Nomena aloha io tadiavin-dry io an!"
- "Ie ! i Nomena mihitsy."
- "Tongava aty amiko rahampitso fa mody misakafo atoandro eo izy, fa indraindray izy aloha dia alina vao mody noho ny asany."
- "Tena ny asako koa tsy ahafahako mankany aminareo, izay anie no mahatonga ahy hanontany ny misy azy e!"
- "Eny ary e ! omeko an-dry ny toerana misy ny biraony fa inona aloha no tena itadiavan-dry azy e ! hilazako mialoha mantsy izy!
- "ttssss ! in-dry ilay niteny tamiko fa tokony hitadiavana vady ikalakely iny sao dia hadino eo koa. Misy akia any an! sao dia mba mahaliana ny zanak’indry. Tsy ratsy an! sady mitovitovy taona aminy tsara."
- "ha, ha, ha ! Tahiana ity koa tena mampihomehy, ary ny an-dry aloha manao ahoana e! Mba efa nahita ve? aza dia fatra-pifidy loatra akia fa indraindray anie anenenana e ! Efa fotoana tsy fanaovana safidy intsony izao taonan-dry izao. Sady efa leo mihitsy aho amin’ity aminareo tsy mahita vady ity. Aiza ka ianareo mirahavavy no mba zanak’i Tatie Hortense, nefa dia tsy mbola misy manambady ihany. Sa ve dia efa tarazo amin’ny fianakaviana mihitsy ity tokan-tena ity? "
- "Ka atao ahoana re ry Flô an ! izahay anie angatahina fa tsy mpangataka e!"
- " Eny e! fa lazaiko fotsiny i Nomena fa ho avy any amin’ny biraony izany ny rahavavin-dreniny. Ilazako ihany indry raha sendra tsy ao izy, mino fa ho faly mihitsy izy mahita an-dry tonga mitsidika azy. Ao antsahavola ao ny biraony."
- " Izay Flô fa aza miteniteny azy hoe misy bandy afaka hiaraka aminy any an! Aleo izaho ihany no hilaza ilay izy rehefa tonga any! Izay! Veloma ary akia an!"
Vita ny antson’izy mirahavavy dia lasa nikarakara sakafo i Tahiana ! I Manitra rahateo moa naka rivotra any ambanivohitra fa dia tokan-tena irery tao izy. Izay koa angamba no mampanahy be ihany ny sainy, tsy manana namana horesahina.
Iny i Hery nifampitantana tamin’i Alexia, nandeha tamin’ny toerana mahafinaritra, mangingina, tontolo kanto feno zava-boahary maitso mavana mahate-hitoetra. Siotsiokam-boronkely malefaka no mikanto ny hatsaran’ny tontolo, ary toa izy roa irery ihany no olombelona tamin’ilay toerana. Voron-kely mandeha tsiroaroa no misidintsidina toa mitarika ny diany teo akaikiny teo. Miramiran’endrika ery ireto mpifankatia, mifampitantana, toa ho doria.
Mifampiondankondana, mifampitositosy, ny tontolo manodidina no vavolombelona mijoro sy mandrotsirotsy. Toa manaiky ny fiarahan’izy roa hitambatra ho iray izay nanodidina azy rehetra teo. Tsy misy mifampiteny fa mifampita hafatra tamin’ny maso fotsiny ihany. Ny sainy toa mifandray tsy ankijanona, tsy te-hiala amin’ilay toerana soa sy mahafinaritra. Nandeha miadana namakivaky ilay tanàna soa toa zaridaina edena. Tampoka teo, nisy anjomaran’ny fiara iray nanakoako tao aorian’izy roa toa manaitra azy ireo hikisaka hanome làlana.
- "Sao dia diso toerana koa aza izany fiara izany," hoy i Hery nisarika an’i Alexia. Nitodika i Hery, " fiaran-dRatrema marina," mbola manohy ny tabatabany ihany ilay anjomara fanairana. Taitra i Hery, taitra tamin’ny torimasony sady namonjy niarina tampoka. Nihevitra izy fa nanonofy nefa toa mbola reny ihany ilay anjomara any an-tokontany any.
" Fa inona koa ary izany," hoy izy sady naka aina kely aloha izy alohan'ny nitsangana teo am-pandriana. Nosokafany ny varavaran-kely dia nangarangarana tany antokontany ny masony..
- "Fa inona koa ary ity, ssshhhh?" hoy i Hery tany an-tsainy tany sady vinitra dia vinitra. Nojereny ny famantaran’ora, mbola vao amin’ny 6 ora sy sasany.
Nanaovany ny akanjo fitena dia nidina tany ambany izy, namoha ny varavarana sady nanatona ny vavahady.
Tarehy toa tsy dia ravo loatra no namahan’i hery ny vavahady hidiran’ilay fiara. Vao nijanona ny môtera dia nivoaka tao lehilahy iray:
- "Ialahy ity letsy matory maraina, efa andro mazava be izao ve letsy, nampanenoina ny kiririoka fanairana, tsy nisy namoha, ny jiro eo an-tokontany anefa mbola mirehitra."
- "Sshhh, ianareo koa ry Dadafara manapaka torimaso vao maraina mihitsy kah". Sady nifandray tanana izy roalahy mianaka.
- "inona aloha ny vaovao entin’i Dadafara? sady te-hanao ialahy ihany i Hery. "Efa ela mihitsy ange ianareo izany no tsy nandalo e!"
- "Andao aloha hiditra ao an-trano e!" hoy ny dadafarany namaly..
Lehilahy ranjanana izay no dadafaran’i Hery, izy no faralahy amin-drainy, mahay mihaingo sady ireny tsy miankanjo raha tsy fitafiana lafo vidy hatrany ireny. Tsy dia mifanalavitra loatra ny taonan'izy mianaka. Mety niara-nilalao akory aza tamin’ny fahakeliny. Izay no saika nahatonga an’i Hery saika hifampiatso ialahy taminy. - "izaho izao vao mifoha, vao avy namita iraka tany Jangil tany aho ange e ! dia vao tonga omaly e!"
- "Hay ve? mandeha tsara ny asa,"
- "Eny e ! metimety ao ry Dadafara a!"
- "Dadafara, dadafara an’ialahy inona koa letsy. Zaza niara-lehibe izao ihany."
- "izay mihitsy, niara-lehibe fa ianareo niha-lehibe kokoa. Efa hita miavaka amin’izay izao ny 6 taona elanelany."
- "Ny vady aza letsy mbola tsy hita be ny ihany, ka aleo rehefa tonga amin’izany vao antsoin’ialahy dadafara izany aho e!"
- "Fa angaha mbola tsy nahita foana hatramin’izao e! Bandy tahaka anareo izao ve dia tsy hirara-kopana ny vehivavy hanatona."
- "Ny sipa amin’izao ange letsy ry Hery, toa ilay miriaira miaraka amin’ny fiara sy mandeha mirevirevy etsy sy eroa no tena itadiavany an’ialahy ; Izaho efa mitady sipa mba matotra fa na izy izay tsy mirevy, na izy izay efa lasan’ny sasany."
- "Mbola tsy sendra ny milay izany ianareo koa ! Fa sipa tahaka ny inona izany no tadiavinareo le!"
- "Ho avy foana letsy izany fa aza matahotra ialahy an?"
"Fa ny tena ahatongavako dia izao, manontany ny fianakaviana hoe efa mba vitan’ialahy ve ny nikarakara ny taratasy amin’ny famindrana ny fananan-dRain’ialahy rehetra amin’ialahy?"
- "Eny e !" hoy i Hery, nisafosafo loha, "efa vita ny tombam-pananana fa ny ankoatr’izay mbola sahirana aho."
- "Ka izay mihitsy letsy an ! efa nifampiresaka tamina tale ao amin’ny fanana-tany aho. Afaka manampy amin'ny fikarakarana hono izy. Noho izay no nandehanako taty. Omen’ialahy fotoana fotsiny aho dia miaraka mankany isika."
- "izaho izao androany no afaka satria rahampitso dia miverina miasa indray. Ka maninona moa raha miomana aho dia afaka miaraka isika e!"
- "OK! tsy mampaninona koa, fa rehefa mbola tsy misy azo hohanina aloha ato amin’ialahy dia aleo aho haka rivotra any an-tokontany any."
- "ie, aleo aho aloha hiomana fa tsy maninona e!"
Lasa i Hery niakatra, nandefa ny famanan-drano. Nanomana izay hohaniny izao maraina. Teo am-pikarakaràna ny sakafo izy vao nandalo kely tao an’eritreriny i Tahiana;
- "Oay leaza, hay moa tokony hihaona amin’i Tahiana aho izao maraina izao! tsy maintsy manontany ilay pasipaoro, dia hanontany vaovao koa ! Angamba iny izay nikorapaka fa tamin’ny niantso azy farany aho dia hoe any amin’ny hopitaly. Tena tsy maintsy mankany aloha. Inona indray ary no ataoko. Vita fiomanana i Hery, dia nidina, nandraraka dite mafana, naka ny mofo efa novidiany omaly hariva. Nantsoiny i Feno, ilay dadafarany, hisakafo miaraka aminy.
- "fa angaha leity tsy netsehin’ialahy intsony ilay 504 an-dRabainin’ialahy ao anaty garazy ao io?"
- "Fa ahoana ? Efa ho erin-taona io izay nipetra-potsiny tao. Ohatran’ny alahelovako an’i Neny koa ilay izy dia tsy sahiko kitihina, fa sasako ihany indraindray kah."
- "Fantatr’ialahy moa fa vao teraka ialahy no nividianan-dRatompokolahy an'io. Nataony ho fahatsiarovana hono, dia io izy io. Notantarain-dRenin’ialahy tamiko izany, nanafarany ahy mihitsy aza hoe mba karakarao io fiara io fa mety tsy ho vitan’i Hery rehefa miasa izy."
- "SSshhh ! mbola hisy foana ny fotoana hikarakarako an’io. Fa tsy izao fotsiny. Fa hono ho’aho, ianareo ve afaka mba mandalo kely eny Faravohitra aloha fa mbola misy olona tokony hojereko kely mikasika taratasy samihafa?"
- "Bof, tsy mampaninona izany, fa misy inona?"
- "Tsy dia misy ifandraisany loatra amintsika fa rehefa afaka mandalo any dia tsara;"
- "Andao ary e ! rehefa vonona ialahy dia lasa isika."
Roso ny dia, somary nisy fitohanana teny an-dalana ! Vao nahita vehivavy mba manjamanja Radadafara dia efa nisiotsioka ery, pppssssittt, pppssssiiit !
Nitodika ilay zazavavy sady nitsiky, somary nipihin-dRadadafara maso, dia namaly oroka lavitra koa!
- "Hitan’ialahy, ohatran’izany sipa amin’izao fotoana, rehefa miaraka amina vam milay ialahy dia mitodika koa izy; sady isika koa ange letsy tsy dia hoe ratsy e! fa tsy maintsy misy foana letsy any ny sipa matotra ary mbola hahita ihany aho!
Tsy niteny aloha i hery fa lasa saina lalina.
<<Ary maninona moa raha ampihaonina amin’i Tahiana ity RaDadafara ity e ! sady mety hiaraka mihitsy fa mitovy revy an ! ka maninona moa, ny taonany mifanaraka tsara, sady amin’izay koa aho afaka amin’iny vehivavy iny, na dia fotoana vitsy ihany aza. Mety azo atao tsara an >>
- "Efa itsy akaiky itsy ilay trano fa afaka maka fitoerana tsara eto isika;"
- "Fa iza aloha no tadiavin’ialahy aty e! Sipa sa bandy;"
- 'Sipa be izany ry Dadaf… azafady e!"
- "Hay, fa angaha moa tsy any Ivandry no mipetraka ny sipan’ialahy?"
- "Sipa hafa izany fa sady akama koa, mety miady amin’ny piesinareo an!"
- "Liana be izahay raha izany!"
Nivoaka ny fiara i Hery, nanatona ny varavarana dia nampaneno ny kiririoka fanairana. Injay fa nivoha ny trano, i Tahiana io, faly dia faly ery no sady taitra aok’izany.
- "Hery, tena nalahelo be anao aho ! fa naninona ianao e ! tsy niantso ahy mihitsy." Sady namihina mafy an’i Hery ity vehivavy, Radadafara etsy sady mitsiky ihany mahita azy ireo, moa i Hery rahateo somary nitodika no nijery azy. Somary nanainga loha;
- "Miaraka aminao angaha io olona io ; Mandroso aloha e ! tena faly mihitsy aho mahita anao ! asaivo mandroso koa io namanao io fa tsy maninona e!"
" Eisy, mandeha tsara izy izany," hoy i Hery tany an-tsainy.
Nokopahiny tanana i Feno dia nivoaka sady nanidy ny fiarany dia nandroso tao amin'i Tahiana.
Vao tafiditra dia raikitra ny fampifankahalalana.
- "Izy no Tahiana, namako izy dia mikarakara ny pasipaoroko. Dia izy no Fano, rahalahin-draiko, izy no faralahy amin-dry zareo."
- "Faly mahafantatra" , hoy i Tahiana sy Feno saika niara niteny.
i Tahiana toa somary menamenatra, I Dadafara toa saika tsy nahaloa-peo.
"Ohatran'ny mety ho tsara ny fandehan'ireto" hoy i Hery tany antsainy tany " fa toa somay menamenatra sady somary nitsiky kely izy.
- "Fa naninona ho’aho ianao no tsy niantso mihitsy, efa nivarahontsana mihitsy aho taty."
- "Tena very ny findaiko, nefa ny laharan’ny findainao tany anatiny tany. Tsy hitako izay nantsoina moa izaho rahateo sahirana."
- "Fa toa hoe tany amin’ny hopitaly ianao!"
- "Ie! tsy izaho no narary fa namana iray izay!"
- "hay ve! tena mampitaintaina mihitsy ianareo ity. Inona aloha no arosoko anareo e!"
- "Misaotra betsaka fa efa avy nisakafo izahay," sady somary nodomin-dRadadafarany i Hery.
- "Mbola misy dité mafana ange raha te-hisotro ianareo e!"
- "Ianao koa ve tsy handeha hiasa moa ka elingeleninay, fa ny tena nandalovako dia hanontany vaovao mikasika ilay pasipaoro;"
- "Ny an’i hery koa moa izany no zavatra mahamaika azy, efa vita izay ilay izy fa mandalo any fotsiny isika rahariva, azonao alaina aho dia miaraka any isika, afaka miala aloha aho mantsy."
- "Vao mainka tsara!"
Vetivety dia voaroson’i Tahiana ny dite, dia nanasa hipetraka sy hisotro, i Feno etsy faly ery. Te hanontany mafy i Hery mikasika izay vaovao fantatr’i Tahiana nefa naleony aloha niandry. Vita ny sakafo.
- "Ka ianao moa izany Mlle Tahiana, notananay teto nefa mbola hiasa, tsy aleo ve aterinay."
- "Tsy mampaninona mihitsy ka!" hoy koa ity farany.
- "Sady lalantsika ihany ny toeram-piasàny."
Nifampijery tsara izy roa, samy menamenatra, i Hery etsy mipi-kelika fa nahita namana ho an’i Tahiana dia mba afaka amin’izay ny geja an-kolaka mahazo azy.
Nivoaka ny trano avy eo, mailamailaka ery i Feno namoha ny fiara, nefa hoy i Tahiana.
- "Ka tsy aleo izaho no ato aoriana fa izaho ange izany no miala aloha e!"
- "Marina izany," hoy i Feno, sady menamenatra ihany izy.
Tsy dia nisy niresaka firy aloha taorian'izay fa dia toa samy variana nijery ny zava misy tany ivelan'ny fiara avokoa. I Tahiana rahateo moa naka afovoany tao aoriana tao, hitan'i Fano tsara amin’ny fitarafana. Saika nifanojo matetika ny mason'izy roa. Naterin'izy mianaka teo ambaravarana mihitsy i Tahiana. Nivoaka ny fiara izy sady nisaotra no nanao veloma. I Fano tsy nahateny fa nihanahana fotsiny. Asa, raha azony atao ny niodina eran’antananarivo dia nataony.
Lasa izy mirahalahy mianaka, niteny amin’izay i dadafara.
- "Fa taiza letsy no nahitan’ialahy an’ireny sipa ireny le?"
- "Naman’ny bôfin’ny ankizy iny! sady dokotera ange iny e! Miady aminareo tsara mihitsy raha hiditra, sady mbola tsy manambady."
- "Milay kosa izany, ao amin’io farmasia io izany no ahitàna azy."
- "ié ! fa izy manana ny biraony any ambony rihana fa tsy eo am-pivarotana."
- "Mihetsiketsika ianao ry Papa an!" hoy i Hery nananihany an’ity rahalahin-dRainy.
Maivamaivana ery i Alexia avy nanoratra ho an'i Hery teo. Lasalasa eritreritra teo anoloan'ny solosaina, nandrevorevo ireo lasa niarahan'izy roa. Ny fotoana nahalalany an'i Hery voalohany, nitsena sy naka azy tany am-pianarana. Ny oroka voalohany nifanaovan'izy roa, tsy ho hainy adinoana. Maika moa fa ilay andro niraisany tamin'i Hery voalohany? naharary nefa toa nahasambatra ihany koa. Izany mivoaka kely ny renivohitra rehefa faran'ny herinandro, aoka fotsiny, sangisangy, resadresaka, orokoroka... " Rehefa any amin'ny toeram-piasana vao miditra maraina izy izao no afaka mamaky iny mailaka iny. Toa tsy andriko ery izay hahenoana indray ny feony. Sa andramako antsoina amin'ny findain'i Neny ihany re rehefa avy eo e?" hoy izy tany antsainy tany sady velontsiky kely irery teo izy nefa koa toa nisento tokana. Mbola tsy tonga ry Malala, ny famantaran'ora koa toa nihisatra dia nihisatra. NIvezivezy nitety ireo pejy isankarazany teo amin'ny vohin-kalam-pifandraisana teo aloha izy. Nidikidirany daholo izao karaza-tranonkala rehetra izao, indrindra indrindra fa ny mahakasika an'i Gasikara sy ny vaovaony. Tafatsofoka tany amin'ny wanadoo.mg no niafarany ary dia tadidiny tampoka ilay adiresy mailakany iray hafa nampiasainy fony izy niserasera tamin'ny karazan'olona sy naneho karazan-kevitra tao amin'ny forum. Adiresy nifandraisany tamin'olona iray izay namboraka ny olany ara-pitiavana taminy, ary nomeny toro-hevitra.
Nosokafany io mailaka, io eny, nanoratra indray ilay tovolahy, efa mailaka telo no avy aminy. Novakiany ... Arahaba, fialan-tsiny, fiangaviana ny mba hanomezana torohevitra azy indray no fehezanteny maromaro niantombohany. Novakiany ... Solafaka indray aho ry Tiana, manahy aho ny tsy ho tafarina intsony, ...., vehivavy ianao, inoako fa afaka manome toro-hevitra ahy satria ianao afaka mipetraka eo amin'ny toeran'ilay olon-tiako. ...., ianao no afaka amborahako ny rehetrako ....
- "Andray, dia mbola niaraka ihany kay izy sy ilay rafozany notantariny tamiko farany .... an! ny naman'ilay rafozany hatramin'ny fahazaza koa ve nanaovany firaisana aranofo? Tsy azoko, aleo hoe averiko kely .... tena marina. ... Mba lehilahy tsy vanona koa ity ka, saingy izaho ve moa hiteny azy izany tsy ho asa. Aleo tohizana ny famakiana " Saika namoy fo i T, (izay marihiko fa mpitsabo), ilay naman'ny rafozam-baviko raha vao tsy nety sy nandà mafy ny hiaraka taminy aho." Iee! Raharaha tadiavina ny anao izany ry tovolahy koa. Raha tena te hanohitra ny fakam-panahy marina ianao dia vitanao izany, saingy ianao mihitsy koa no mankafy ilay toetra ratsy, tsss ...."
- "An!...loza ity! ... Andriamanitra o! ... Inona ity lazain'ity? ... notohizany: " ny silipon'i T. adinony tao amiko, nivalombalona tany anaty lambam-pandriako no hitany raha iny izahay avy niray iny. ..... Nirifatra tsy tana izy .... voan'ny lozam-pifamohivohizana ny alina .... tsy maintsy nalefa notsaboina any an-dafy...."
Maizina tamin'i Alexia ny tany aman-danitra. Te hitomany izy, nefa tsy nahalatsa-dranomaso. Te hikiaka mafy izy, nefa toa kenda tanteraka, nitambolombolona be ihany ny tao anatiny. Niondrika moramora izy. Navokony mafy ny totohondriny havia, ny tanany havanana kosa namihina mafy ilay totozin'ilay solosaina nampiasainy.
- "Tsia an! Tsy marina izany e, tsy mino aho," hoy izy nanomboka nifokofoko. Tena i Hery io. Lehilahy tsy vanona, sssh ... tsy mataho-tody sssh... tsy vanona... hheinnnn.... Hay an'i Tatie Tahiana izany iny? ...iny no naman'i Neny, sady mpitsabo, tsy nampoiziko hheinnn! Ranomaso tsy ranomaso amin'izay no nameno ny tavany. Ambonin'akanjo sendra nihantona teo an-damosin'ny seza no notakariny namafana ireo ranomasony mipatrapatraka. Lehilahy tsivanona, tsivanona izay no naverimberiny.
Rehefa avy nanala ny fony elaela teo izy dia... mba tonitony ihany.
- "Noho ianao no efa saika namoizako ny aiko farany teo. Sanatria ny mbola hamoy fo noho ianao ry Hery, tsy mba hiova raha ianao. Tena tsy misy ilàna anao. Nateraka tsy ho vanona angamba, mandratra ihany koa izay rehetra sendra anao. Mieritreritra ny tsy mba ho tratran'ny aloka ianao ry Hery nandrintra ny taona maro niainanao, ka izao tsy mba aloka intsony no hahazo anao fa dia ny aizina mandrakizay. Aizim-pitiavana, manodiava anao ny mahazo ahy sy izay mety ho efa nataonao koa tamin'ny karazam-behivavy rehetra hafa manan'alahelo aminao."
Na dia niezaka ny hampitony tena mafy aza i Alexia, dia toa azony sary an-tsaina izany ny firaisana ara-nofo niarahan'i Hery tamin'i Malala, tamin'i Tahiana, niserana tao an-tsainy koa vehivavy hafa. Ireny nahasambatra azy tamin'i Hery ireny, hay nahasambatra olon-kafa koa, noheveriny fa izy irery. Indraindray tsapany ho voatsindrona mafy ny fony dia mitomany izy. Indraindray mihevitra ny tenany ho vendrana izy ka voafitaka, dia manome tsiny kely ny tenany. Indraindray toa mahatsiaro izy fa voazimbazimba sy voaviravira ny vatany, dia kiriko sy misafoakan'ny hatezerana. Nitsangana izy, nivezivezy eran'ny trano, tsy hitany izay ho sarangotina.
- Te hamaly faty azy aho. Tahak'izay aho tsy nandefa iny mailaka iny, tahak'izay ity aloha no nosokafako izay vao ny tena ahy. Hamaly faty aho ve? amin'ny fomba ahoana anefa? izaho aty, izy any, soa ihany aza aho fa aty lavitra aty! Aleo izy ho any. Tsy hiantso azy aho, tsy hanoratra ho azy intsony, tsy te hanana fifandraisana aminy intsony aho na dia kely aza. Tsy maintsy mitraka aho, hoy ahy sy ho an'ny ho aviko manontolo. Tsaroako ny tenin'i Profesora Mahefa tamiko. Tazomiko ho ahy samirery izao trangan-javatra izao. Iza moa no mba azoko itokiana? Ny reniko, olona tokony ho faran'izay akaiky ahy aza no toa lasa vahavaloko voalohany? Eny e! tsy naloaky ny kibony aho. Izany angamba no nanaovany ireny. Tsy te hanome tsiny azy aho. olombelona ihany ny olombelona, mitoetra foana ny hoe "nateraka" sy "tsy nateraka" na dia tsara fo sy toetra aza ny olona."
Nandinika ny fiainany manontolo teo izy. Nisaina kely ny zava-nitranga taloha notantaraina taminy. Ny amin'ny TENA FIAINANY.
- "Indrisy! nahoana re ry Neny no dia nandao ahy ianao e! Any ianao izao mahalala ny manjo ahy rehetra. Neny a! ampio ny zanakao, inona no tokony ataoko? aiza no tokony izorako? Neny a! tsy afaka ny hiverina ety an-tany intsony ianao. Eny fa na dia izay aza ny faniriako faran-tampony izao. Tarito any amin'izay raiko niteraka ahy aho Neny a! Mahatsiaro loatra ho irery aho eto amin'ity tany fandalovana ity. Tafasaraka samy mbola tao anatiny fitiavana tanteraka hono ianareo, mino aho fa ho tia sy hanaiky ahy zanany izy e! Andriamanitra o! Mino aho fa izao no fotoana tokony mba ahalalàko izay tena raiko niteraka ahy, mahatsiaro ho irery loatra aho.
Loulou (ralouloune@yahoo.fr) & Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)
Nanembonembona an’i Mihary ihany i Hery nony izy samy irery no teny ambony fiara niaraka tamin'ilay mpamily ndeha hanatitra azy tany antranony. Tsapany ho tahaka ny misy hafatra tian’ity tovovavy ity hambara, nefa tsy sahiny nolazaina taminy akory . Sanatria hoe tsy misy fo mitempo ho an’i Mihary mihitsy any anatiny any, fa afo roa tsy mitovy ireo hoy izy ka ny iray, fitiavany an’i Alexia izay niredareda hatramin’izay ary tsy mety maty ao am-pony, ny iray kosa afo nitsilopilopy efa saika maty nefa narehitry ny solika tampoka.
Fantany fa naharary an’i Mihary ny nataony, kanefa, raha ny hamafin’ny fitiavany an’i Alexia dia tokony tsy hisy haharava azy araka ny eritreriny.
Fantatr’i Hery tokoa fa maditra izy, tsy mahatanty ny langolangon’olona ary rendrika hatrany raha vao tobasan’ny safosafo sy ny orokoroka. Na izany aza anefa no niseho, dia tsy mba nampihena ny fitiavany an’i Alexia mihitsy ny fihetsika tsy voahevitra nataony.
Toky no nataony tamin’i Mihary, izy ilay niteny hoe : « raha tena tianao marina izy dia hajao ny tenanao ». Satria izay ny marika voalohan’ny fitiavana, mitoky amin’ny fifanajàna. Raha mba fantatr’i Alexia marina moa ny hadalàny rehetra nataony tao anatin’izay fotoana izay. Dia inona marina re no hitranga ?
Tonga teo am-bavahady ilay fiara nanatitra azy. Nidina izy sady namoaka ny entany.
- "Misaotra anao mihitsy Rangahy fa tena mahafatra-po ianao nanatitra ahy hatraty an-tranoko. Tsy maintsy manome ity aho fa ataovy ho toy ny fahafaliam-po izany e! Ianao rahateo moa mbola nanaiky nandeha na dia andro tsy fiasàna aza."
- "Tsy maninona izany Ramose fa anisan’ny iraka nampanaovina ahy ange ny naka azy tany e! tokony ho rahampitso aza isika no niverina fa zarako aza,.. mba te hahita ny vady aman-janaka koa e !…Tsy maninona fa raisiko ihany ny fanomezana atolotrao ahy. Raisiko ho fanomezana izany fa tsy tambin-karama akory."
Nanampy an’i Hery nitaona ny entana ilay mpamily. Vita izay dia lasa izy nitondra ny fiara namonjy ny fitobiana.
Nosokafan’i Hery avokoa ny varavaran-kely rehetra. Ny andro rahateo mbola tsy tena maizina. Novohainy midanadana hidiran’ny rivotra madio. Hafa ihany ny ato an-trano hoy izy niteny aneritreritra. Tao tokoa no nahalehibe azy. Tao no niriariavany tamin’ny reniny. Nakany ny anatra mamy sy feno fitiavana hatramin’izay. Tao koa anefa no nanaovany izao hadalàna mihoa-pampana tsy fampiseho masoandro rehetra izao.
Nitsilanilany teo ambony fandriany izy. Namelombelona ny nofinofiny amin’i Alexia.
- "Mino mihitsy aho fa mbola velon’aina soa aman-tsara any izay ilay tiako. Matoa aho manembonembona azy dia fantatro fa misy rohy mifandray foana any ho any. Raha mba miantso ahy izy izao dia ho feno ny fifaliako; Oay, tsy maintsy miantso an’i Tahiana marina fa izy izao no mahalala ny vaovao.
Andray, hay moa tany anatin’ilay findaiko very ny laharana azo ianatsoana azy. Loza izany ! Ny andro koa ity efa miha-maizina, izaho reraky ny dia.
Aleo aloha handeha hisakafo atsy amin’ilay hotely kely atsy dia maka aina tsara rehefa avy eo. Rahampitso avokoa vao heverina izany rehetra izany."
Narindrin’i Hery indray ireo varavaran-kely rehetra dia iny izy nandeha tongotra moramora nankany amin’ilay fisakafoanana eo akaiky ny tranony.
Fa tany amin’i Tahiana amin’io, izy irery no mijery fahita lavitra ao amin’ny efitranony. Akanjo mandry manify no teny an-kodiny, ny tapany ambany mitsofoka any anaty lamba.Toa tsy amin’izay fandaharana amin’ny fahitalavitra anefa ny sainy fa mieritreritra lalina ny tokony hataony :
- "Fa mba maninona koa ary ry Hery no mamono finday foana hatramin’izao. Nahoana no tsy nandrenesam-baovao mihitsy, tsy niantso. Tsy sahiko koa ny nanadihady tany amin’ny toeram-piasàny fa sao dia raikitra eo ny fanontaniana be! Dia sanatria ve nivari-lavo araka ny nolazain’i Malala ? aza hitako.
Nefa fantany tsara fa izaho no manana vaovao mikasika an-dry Ratrema mianakavy. Inona ary ny manjo ilaikely iny?" hoy ihany izy anankampo.
" Fa na izany na tsy izany, ny valifatiko ataoko amin’i Malala aloha tsy maintsy omaniko tsara. Iny izay any efa tsy mitombina mihitsy. Angamba efa nanandrana niantso fa tsy nahazo. Mba adaladala fisaina koa ange izaho ity e !
Teo aho nanampy an’i Hery nanao ny pasipaorony mba ahafahany mitady an’i Alexia. Vao niantso ahy anefa i Malala dia lasa valifaty ny tsy hahitan’i Hery azy intsony indray no aty an-dohako. Inona re no tena paika tsara e !
Tsy tiako mihitsy aloha ny mbola hidiran’i Hery amin’ny fianakavian-dRatrema e ! Fa izy moa manao mafy loha ny hitady izao malalany izao foana no masaka ao an-tsainy! He izany izy hoe: i Alexia aza tsy te-hiverina aty intsony!
Ka tsy aleo ve itadiavana sipa hafa mba tsaratsara i Hery ? Iza anefa ? Raha mba misy izao ato amin’ny fianakaviana dia tena lafatra mihitsy. "
Variana teo am-pandriana teo i Tahiana, lasa saina lalina amin’izato tetik’ady valifaty ketrehiny.
- "Miala tsiny!", hoy Ratrema namaly azy tamin’ny fahamenarana. "Tena tsy fantatro mihitsy e!" ssshhh, raha mba tena fantatrao marina mantsy ny olana mianjady amiko!"
- "Ssshhh!" hoy i Corine, andramako farany fa efa tena za-draharaha amin’io aho, hitan’ialahy tsara Ratrema ny asan’ny tanako fa tsy misy lehilahy tsy azo velomina izany eo!"
Nipetraka teo ambon’ilay fandriana kely aloha i Corine, vetivety monja niala teny aminy ilay tati-nono mainty manify namehy ny tratrany, hita nibaribary teo anoloan-dRatrema amin’izay ny hakanton’ny nono roa mipetraka tsara sady voakolokolo fatratra.Tahaka ny voankazo masaka tsara mampite-hioty sy hihinana. Notazotazominy vetivety aloha, sady nojereny tsara, dia nalainy ny tanan-dRatrema hisafo ireo nonony roa.
Nataon’i Corine tany am-bavany amin’izay ny fanondro adalany sady no tsetsitsetsafiny teo. Ny masony amin’io manao fijery miangoty amin-dRatrema ihany. Ity farany rahateo mba te hankafy, ny tànany roa amin'io tsy miala amin’ireo voankazo matoy.
Rehefa vonton’ny rora tsara ny fanondron'i Corine notsetsitsetsafiny teo dia hoy izy hoe :
- "Fanaoko letsy ity rehefa vizana iny ny vadiko, misy maha-mety azy ihany fa aza kivy mihitsy ialahy fa tsy maharary akory !!!"
- "Fa inona no hataonao ahy?"
- "Sshhhut ! Tsapao fotsiny!"
Naverin’i Corine tao am-bavany indray ny fanondrony teo, dia nasainy ningain-dRatrema ny feny roa. Naka fitoerana tsara manatrika ny kibon-dRatrema izy avy eo, ny tanany ilany miverina manafosafo tsara ny filahian’ity lehilahy tiany hotairina amin’ny torimasony.
Vao niala teny am-bavany ilay ratsan-tanany dia nosafoiny ireo kitapo mifono hoditra roa voloina madinika nanoloana azy. Natsofony moramora teo amin'ilay lavaka teo aoriana ilay ratsan-tanany mando teo. Somary taitra kely Ratrema sady nijery an’i Corine.
- "Fa inona ity ataonao e?
- "sshhut ! manaitra ny taovan’ialahy aho ho’aho ! Avelao fotsiny fa izaho no manao azy. Tsy maintsy atao « contre-attaque » ity.
Somary natosiny ny fen-dRatrema ahafahany mahita tsara ny filahiany, dia nampanantoniny teo ny molony, nokitikitihany tamin’ny lela ilay lohany mbola matory iny, ny ratsan-tanany ilany ao aoriana mikarokaroka mora hamelona indray izay tsirim-panentana mbola tavela amin-dRatrema.
Injay fa tsapan-dRatrema misy tosa-dra mandalo amin’ny maojany manomboka mameno ny filahiany. Ilay kitikitiky ny fanondron’i Corine koa toa lasa mahafinaritra azy tampoka. Ny lela manafosafo malefaka ny loham-pilahiany vao mainka manampy tosika azy hihenjana kokoa.
Vao tsapan’i Corine fa mitombo halehibe ny filahiana teo amin’ny molony dia somary nateliny moramora no sady lalaoviny ihany koa. Ny tanany mbola tsy miala nanafosafo tao aoriana tamin'io raha tsy efa mafy tsara ny filahian-dRatrema.
Nirehareha mihitsy ny anao vavy fa mahay zavatra. I Ratrema koa toa te-hankafy mafy. Vao tsy omby tao am-bavany intsony ilay filahian-dratrema dia noleladelafiny tamin’izay. Nesoriny moramora ilay tanany nanafosafo tao aoriana.
- "Ao amin'izay", hoy i Corine !
- "Corine an ! izaho ange efa niteny taminao fa efa milamina tsara ny aminay sy Malala e ! sao dia tsy mety izao ataontsika izao?"
- "izay indray ialahy, akimpio ary ny maso dia eritrereto ao ny Malalan’ialahy fa ny ahy izay hahazoako fahafinaretana no ataoko."
Natsotran’i Corine tsara i Ratrema teo ambony fandriana, naveriny indray ilay safosafo sy nononono teo, nalefany manaraka ny vatan-dRatrema ny tanany, nisafo ny tratrany, nidina teny amin’ny feny. Ratrema amin’io manakimpy ny masony tsy mijery fa mieritreritra an’i Malala tahaka ny manafosafo sy manome fahasambarana azy.
Rehefa tsapan’i Corine fa tena mihenjana amin’ny fara-tampony amin’izay Ratrema, dia nitsangana izy nanaisotra ilay atin’akanjo kely teny aminy, niakatra teo ambony fandriana, nosafosafoiny tamin’izay ny fivaviany efa mando sy vonton-dranom-pahafinaretana.
Nitingitingina teo ambonin-dRatrema izy, noraisiny sady najorony ny an'i Ratrema sady natohony teo amin’ireo molotry ny zohim-pahafinaretany.
Natsofony moramora dia nalentiny lalina dia lalina tany anatiny tany. Tsy nihetsika avy hatrany izy aloha. Ny tanany no nanafosafo ireo molo-pivaviany toa nihitatra be nidiran’ilay tehina mihitsitra mafin'i Ratrema teo. Tsapany tena feno ny ambany foitrany, manenika azy sahady ny hasambaran’ny nofo efa tsy nolalovany efa ho elaela izay. Notereny moramora tamin’ny fanondrony ny fotory ny filahian-dRatrema, dia ningainy moramora ny maojany, nakariny kely, dia nampidininy indray avy eo ;
- "Tena tiako be mihitsy ilay eo ambony an!" hoy izy sady miangola be amin’ny fiteniny.
Nahetsiketsiny tamin’izay ny maojany sady nataony niaka-nidina, nihamafimafy, ny filahian-dRatrema amin’io tazana mangirana mihitsy mivoaka sy miditra avy tao anatin'ilay zohim-pahafinaretana vonton-kamandoana tsy misy ohatran'izany.
Fito minitra taorian’izay, manomboka misefosefo Ratrema, mitrentrena tsy fantatra hoe ahoana sady nanomboka nanaingainga ny fitombenany toa nanipitsipy an'i Corine.
- "OOOhhhh ! ouiii ! tena tsara Malala an!"
Farany, tsy nahatana intsony ingahibe fa nalefany tao amin’i Corine avokoa ny ranon’ainy iray manontolo.
Tsy taitra tamin’izay akory anefa i Corine. Tsy navelany hihetsika mihitsy Ratrema, ilay tosa-pahasambarana teo rahateo tena tsapany nanome hafanana hafa nameno ny kibony, vao mainka aza nampitombo ny fahafinaretany tsy tiany hijanona intsony. Nohidiny mafy tsara ny hozatry ny fivaviany. Somary nietsiketsika kely teo izy, niaingainga indray, nanamafy ny fihetsiny ; Ratrema amin’io efa mangorintsina aminy daholo ny faritry ny maojany rehetra, nitady hitolefika fa tsy afaka. Ny filahiany mikorisarisa fotsiny tahaka ny osoran-tsavony malama mandroso sy mihemotra anatin’ity zohy mafana efa voatondraky ny ranom-pahasambarany.
Tampoka teo, "Ho avy aho letsy Ratrema an ! oouuuiiiii !"
Tsy tantin’i Corine intsony, rian’aratra mila tsy ho zakany no nanenika ny vatany, tafatorombina ny anao vavy, nidaboka teo an-tratran-dRatrema, mbola tsapan’ity farany ny fiemponempon’ny fivaviana vao tonga fahasambarana, misintona ny ranon’aina hiditra any aminy hamonjy ny lalindalina kokoa.
Raha tsy nanainga ny maojany i Corine hitsotra manaraka ny vatan-dRatrema tsy nisaraka ny taovam-pananahan’izy roa.
Tsy nisy nifampiteny aloha nandritra ny minitra vitsy fa samy reraka, sady naka aina vetivety teo am-pifampitositosiana teo.
- "Ratrema an ! fa angaha dia tena tany amin’i Malala marina ny sain’ialahy teo,"
- "Fa ahoana?" hoy i Ratrema namaly sady ohatran'ny gaga.
- "Tena tsy tsaroan’ialahy angaha ny notenenin’ialahy teo?"
- "Fa inona no noteneniko?"
- "Shhh ! aleo ho any e …"
Soa fa fantatro fa tsy afaka manana anaka ialahy, fa raha tsy izany tsy navelako hanao ny tahaka ny teo iny!"
- "Tsy mazava mihitsy ho’aho," hoy Ratrema.
- "Izaho ange letsy mbola tonga fotoana foana hatramin’izao e ! Na dia efa tsapako aza manakaiky ny fitsaharan’ny fadim-bolako dia mbola tsy haiko mahatonga ahy mitady foana, ny vadiko anefa tsy mahatosika intsony indraindray. Dia ialahy koa asa izay nataon’ialahy tany efa ho iray volana sy tapany. Mba mila tambitamby ange letsy ny vehivavy, mila an’ireny, raha tsy izany aho ve hikoropaka hankaty vao niantso ahy ialahy? Izaho kosa aloha matahotra ireny bandy tanora ireny sao dia mbola bevohoka eo!"
- "fa ahoana koa ianao no ho bevohoka, ny zanakao farany aza efa lehibe any an-dafy no mianatra, ka hoe bevohoka."
- "Ny vadiko ange letsy no notapahina ny làlan’ny tsirin’ainy fa tsy ny ahy e ! Izaho izany mbola mety ho bevohoka tsara mihitsy. Fa izaho aloha tsy sahy manao an’ireny nataontsika teo ireny raha mbola bandy kely e ! Fa sssshh, ialahy koa moa efa tsy afaka miteraka dia izay no tena mahatonga ahy mitady an’ialahy foana… Fa ny tena tsy azoko ange letsy Ratrema e ! Ohatran’ny odian’ialahy tsy hita ny nataon’i Malala an’ialahy, ny zanany tsy misy an’ialahy akory fa nomeny teny amin’ny sisiny ialahy, ny ataony amin’i Alexia koa vao mainka loza. Dia gaga fotsiny aho naheno an'ilay hoe efa milamina ny aminay e" - "Tsy te-hanao afa-tsy amin’ny vadiko intsony aho raha ny tena marina e! Ohatran’ny tsy nazava taminao koa ny nolazaiko," hoy Ratrema, "efa hoe tiako lavitra tsy araka ny fiheveranao azy ireo zanako ireo, ireo no nomen’Andriamanitra ahy hotazaiko dia efaiko ny adidiko, ary tena tiako ireo, dia rehefa tiako koa ny reniny dia ampy ahy izay!"
- "Eny e ! Ekeko izany, fa vehivavy aho no miteny, fa araka ny fitantaran’ialahy an’i Malala, dia… tsy fantatr’ialahy akory izao izay ataony any lavitra any…, izaho ange letsy manana fom-behivavy fa rehefa zatra izay, tsy mety fa mitady foana."
- "Ny an’iny Hery ihany no tena tadiaviny, ankoatr’izay inoako fa tsy misy. Izy any, ilay Herin-doza iny aty, dia milamina ny saiko."
- "Enga anie ka izany tokoa!"
Tsy nahoan’i Corine intsony izay resaka hafa manarontsarona ny sainy, fa ny hafaliany namelona ity lehilahy efa tototry ny adin-tsaina no lasa reharehany tany anatiny tany.
Dia naka torimaso vetivety aloha izy ireo. Afaka antsasak’adiny vao niarina, niara-nisasa teo ambonin’ilay bakoly lehibe izy roa nony avy eo. Niakanjo tamin'izay dia niala hetaheta tao amin’ny birao rehefa avy eo.
- "Dia ahoana izany no hataontsika! Afaka manavotra ahy ve ianao e?"
- "Mbola manana roa volana sy tapany isika ! Aza matahotra ialahy, vitantsika foana io."
Nitsangana i Corine nandao ny seza nipetrahany ary nanatona ny varavarana, dia notolorany oroka lavitra kely Ratrema sady nikopakopa-tanana izy no nanao veloma. Jejojejo ery nivoaka ny birao.
Tany amin’ny hopitaly no nandanian’i Hery ny fotoana mba fialan-tsasatra azony taorian’ny asa nanirahana azy. Miandry an’i Mihary no nataony vaindohan-draharaha na dia tsy nisy soritr’aretina tavela intsony aza tamin’ilay izy fefiky ny ranomasina. Ilay Dokoteran’ny hopitaly aza moa, latsa-bava mihitsy fa misy fitahian’Andriamanaitra mahazo ity tovovavy dokotera ity fa na dia fahasemporana, na aretin’andoha kely aza tsy nisy, ny fahavizanany rahateo afaka vetivety. Tsy natahorana ihany koa ny mbola mety hiverenan'ilay fahadisoam-panantenany teo. Faly avokoa ny rehetra, i Hery moa tsy hitany izay hambara amin’i Mihary tamin’ilay nanavotany azy teo amin’ny fanontanian’ny polisy. Tsy nisy resaka intsony fa dia nilamina ny raharaha.
Fa ny loza dia nandritra ny fivezivezena i Hery eran’i Mahajanga no very ny findainy. Tsy tsaroany mihitsy na taiza na taiza no nanadinoany ilay izy. "mety ho lasan’ny mpangarom-paosy ve? Hoy izy nanontany tena. " Misy an'izany ve aty Mahajanga?" hoy ihany izy nanohy ny eritreriny. Soa ihany fa ahy izy iny hoy izy fa tsy an'ny orinasa. Rehefa tonga any Tanà aho manolo azy indray izany.
I Mihary kosa amin'io nisaintsaina lalina ny hevitr’ilay nofiny. Nofy no nahatsapany azy satria nandritra ilay fotoana tsy nahatsiarovany tena no nisehoany. Indraindray anefa toa mitamberina ao an-tsainy ihany rehefa miresaka amin’i Hery izy. Indraindray very hevitra izy amin’izay tokony hatao. Dia tena tsy azo tantaraina na amin’iza na iza marina ve iny nofy iny, nofy tsara sa nofy ratsy ? nofy mifono hafatra lalina tsy maintsy tanterahina.
Dia inona no tena hitranga raha tsy tanany ny vavany fa mitantara iny izy ? "Mbola tia an’i Hery aho" hoy izy tany antsainy tany. " Ho vitako ve anefa ny hanova azy amin’ity hadalàny be mihoam-pampana ity, ary raha tsy vitako, dia inona no hitranga?" vaka teo ny sainy mandinika ny tokony hataony. Ireo fanontaniana ireo no niverimberina tao antsain'i Mihary tao. Tsy hita soritra tamin’ny tavany akory na dia izany aza anefa ny adin-tsaina mahazo azy.
Toa nentin-javatra izany aho izy tamin’ilay niroboka tany anaty ranomasina. Asa, inona marina no nahatonga ahyy nanao ireny fihetsika tsy voahevitra ireny ?
Nony dila ny efatra andro dia nanapa-kevitra i Hery fa hiverina hody any Antananarivo amin’izay. Na dia afaka nandeha fiaramanidina aza izy dia naleony niaraka tamin’i Mihary satria tsy foiny nilaozana ary tsy hampandry saina azy ny handefa an’i Mihary irery hamakivaky ny 600 kilometatra izay tsy mbola nahazatra azy akory. Ilay fiara nandehanan’i Mihary koa malalaka satria izy irery no saika ho entin’ny mpamily. Dia niray dia izy roa, tsy dia nisy resaka lava teny andalana.
Vao tonga teto Antananarivo dia i Mihary aloha no naterina tany an-tranony.
Nampidinina ny entany dia nobatain’i Hery nankeny amin’ny varavaram-be.
Nampanenoina ny lakolosy fanairana.
Injay fa namoha trano ny maman’i Mihary,
- "Tonga soa ny zanako!"
- "Manao ahoana i Neny! nanao ahoana ianareo taty izay?"
- "Mandrosoa aloha e ! ary olona efa fantatro izany miaraka aminao izany! tsy i Hery ilay niara-nianatra taminao ve ity," hoy ny mamany sady nampiditra ny solomasony.
- "Ie ! izy mihitsy io ry Neny an ! nifankahita tany Mahajanga izahay. Ka tsy aleo aloha ampidirina avokoa ny entana."
Faly dia faly ery ny maman’i Mihary nahita indray an’i Hery. I Hery aza gagagaga fa toa tsy fantatr’ity reniny akory izay nanjo an-janany. Ary tahaka ny olona efa fahitany izany ny endrik’ilay ramatoa, tsy tadidiny mihitsy na dia niezaka aza ny sainy hikaroka lalina.
Ny fiaran’ny ministera moa tsy maintsy mody ka tsy afaka ny hijanona ela ao an-tokontany, ilay mpamily rahateo nanaiky ny hanatitra an’i Hery any an-tranony.
Nony vita ny resaka rehetra tao an-trano dia naterin'i Mihary teo an-tokontany ny tovolahy. Nosintominy ny tanany mba hiresahany.
- "Hery an ! aza gaga ianao raha tsy mahalala ny nanjo ahy tany Mahajanga i Neny fa marary fo izy io ka raha fantany izany dia mitarika aretina ho azy." Noferana tany Mahajanga iny resaka iny fa tsy tody taty mihitsy ka ianagaviako ianao hihevitra iny toy ny tsy misy akory."
- "Eny e!" hoy i Hery menamenatra.
- "Izay fa mitandrema tsara ianao, hendre tsara. Araka ireny noilazaiko anao ireny dia mahonona tena tsara tsy ho azon’ny fakam-panahy. Tsy maintsy mbola manara-maso anao foana aho fa mila mifampiantso isika."
- "Azoko atao mihitsy ny mampanantena anao izany ry Mihary, ary ny zavatra rehetra ataoko manomboka izao dia noho ny fitiavako an’i Alexia daholo. Ekeko ny teninao fa hampionona ny tenako aho, ary tena ataoko ho an’i Alexia izany."
- "Veloma ary! antsoiko ianao raha vao mahavidy finday vaovao aho an!" hoy ihany i Hery.
- "Eny ary ry Hery, mirary Krismasy sambatra raha toa ka tsy mifankahita alohan’izay."
Nifanoroka tamin’ny takolaka izy roa, dia nandray ny fiara i Hery hanatitra azy tany an-tranony.
I Mihary kosa variana nibanjina ilay fiara nandao ny tanànany. Tahaka ny lasa nanaraka iny avokoa ilay fanantenana nipololotra tampoka noheveriny hiara-dalana amin’ny fiainany.
Lasa i hery, lasa nanaraka azy ilay fitiavana nantenainy hatramin’ny fahazazàny.
Toa nanganohano ny masony; teo no nahatsapàny fa tena mbola tia an’i Hery tanteraka izy na dia saika namoizany ny ainy aza izay fitiavany izay…
Ity olona antenainy anefa toa tsy mitempo fitiavana azy akory!
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 5:: Hametraka hevitra (3) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)